Kungani iphupho ex-unkosikazi lomyeni wakhe? Dream ncwadi kuyobe ngiyisho impendulo
Kungani ukuphupha ngani nowayeshade unkosikazi umyeni wayo? Ezinye eziqeda amandla siwumsebenzi ibonisa imizwa nokwesatshwa ophuphayo empilweni yangempela. Abanye bagomela ngokuthi iphupho libikezela izenzakalo ezithile mayelana kwenzeke. Ukuze uqonde imininingwane yaleli puzzle ukusiza wazibona izithombe ukuthi ibalulekile ukukhumbula.
Kungani iphupho ayengaphansi umfazi wendoda yakhe: Dream Miller
Iyini impendulo yalo mbuzo liyincwadi iphupho, ihlanganiswe ngu Miller? Kungani iphupho ex-unkosikazi lomyeni wakhe? Isazi sokusebenza kwengqondo German Gustav kusikisela ukuthi iphupho kubonisani umhlangano kwesibhamu, maduze nje kwenzeke ngokoqobo. Ingxoxo ne obeshade ongabikezela senzakalo ne owesifazane, okungase nomkhwezeli.
Kusho ukuthini uma amaphupho ami ophuphayo ukuphikisana nomyeni wakhe, yangaphambili? Le ndaba kufanele kuthathwe njengendawo isixwayiso. Umuntu othemba senkosikazi ubuthongo, ungase ukuxake ke, ukukusingatha buhlungu ngemuva. Wedding umyeni iphupho lakhe yangaphambili lapho ukuphila izintokazi izinguquko ezinkulu kudingeka kwenzeke. Mhlawumbe bangamangala sizoxhunywa umndeni wakhe.
Dream Ukuhunyushwa Tsvetkov
Kungani ukuphupha ngani nowayeshade umfazi wendoda yakhe, uma ephusheni, + uDorka imizwa affectional? Kungenzeka ukuthi umyeni wakhe wamesabisa nemiphumela ebuhlungu break yakhe yangaphambili. Ukuqabula Engxenyeni yesibili ne UCwele nowayengunkosikazi dream endala ukuze kufuthwe ukungqubuzana kunencazelo efanayo ngiphuphe ngocansi.
Ukuxabana, ukulwa umlingani kanye owayeyintombi yakhe unkosikazi - le ndaba ubhekisela yokuthi Engxenyeni yesibili has a imikhuba nokuphathelene ukuthi kakade noma ngokushesha uzoqala ukusihlupha uhlupho Dreamwalker. Okuxakayo nje yengane lokuzalwa iphupho nokubulala nokuthumba owesifazane, umyeni wakhe aba wayeke beshadile.
Kungani iphupho ex-unkosikazi lomyeni wakhe? umprofethikazi Bulgarian ibona lokhu kungcono kuveza iphupho yokwesabela kwangaphakathi abesifazane. Kungenzeka ukuthi hhayi yena eningakuthwala sokumukisa impilo esidlule, nakuba izinkumbulo ezibuhlungu kwakhe. Amaphupho sekusasa eliqhakazile ngeke ufinyelelwe kuze uwayehlalise zange alale Some zazo zangesikhathi esidlule.
Okuhle ubuthongo umprofethikazi Vanga wathi kuso intokazi, okwakubekelwa Lapho usushadile kumlingani uyafa. iphupho elisabisayo kusikisela ukuthi esikhathini esidlule uyekile kubangele ukukhathazeka umphuphi, usekulungele esitebhisini unethemba ibe nekusasa eliqhakazile.
incwadi iphupho Freud sika
Kungani ukuphupha ngani nowayeshade umfazi unkosikazi samanje umyeni wakhe, uma uthembele wayengahambisani nokuchazwa Freud? Isazi esidumile ukholelwa ukuthi leliphupho ubonisa ukuthi lowo mphuphi walelo usola ukuthi isigamu zokungethembeki yesibili. Ngeshwa, izinsolo wakhe kuyafaneleka. Amathuba kuphezulu ukuthi umyeni maduze kukhuphukele emakhaleni ami noma kakade waphula lithandana othile nakumbuthano bakhe bangaphakathi.
Futhi efana ngesakhiwo kungenzeka agudlisela emisebenzini yokuthi umlingani unesifiso ukuze ubuyele elala wangaphambili, ukuthi ayenzi umzamo ukwenza kanjalo. Kungenzeka ukuthi ezophatha. Ngaphezu kwalokho, iphupho ongabikezela ukuvela izinkinga ubuhlobo naye empilweni yangasese. Ngokuthakazelisayo, imbangela yale nkinga, ngokuvumelana Freud sasho, amanga esikhathini esidlule.
Dream Ukuhunyushwa Juno
Uma ugxila iphupho nencazo Juno, lokho kuyiphupho ex-unkosikazi lomyeni wakhe? Ephusheni ukubona lona wesifazane ngokushesha ebhekene nobunzima empeleni. Cishe asongele unezinkinga zokulala ekuphileni kwakhe siqu.
Nokho, leliphupho ongabikezela ikusasa, nenkathazo emkhakheni ibhizinisi. Ikakhulukazi kulesi iphupho kufanele sinake labo abesifazane abenza ibhizinisi. Ngezinsuku ezizayo kufanele uqaphele ngemvume amadili entsha, hhayi ukuthemba izipesheli esuka kubantu engathembekile. Futhi sonnik Juno uxhuma lezi amaphupho ngokungalugcini kuyena lolu daba isisulu okungase balele senkosikazi noma othile endlini yakhe.
Kungani ukuphupha ngani ex-unkosikazi nengane umyeni wayo? Ukuhunyushwa ubuthongo incike yini noma cha Engxenyeni yesibili unezingane emshadweni odlule. Uma yebo, khona-ke le ndaba kungenzeka agudlisela emisebenzini yokuthi ubuhlobo bakhe unina isidingo ingane yakhe ukuba ixazululwe. Liphinde kungaba ukuxwayisa ukuthi zokugcina nezindaba ezingakaxazululwa, okuyinto ukukwenza.
Kungani iphupho komyeni wakhe ex-unkosikazi nengane nemfati, uma empeleni ingane nje? Owesifazane owesaba ukuthi umyeni wakhe akakwazanga abuyele emndenini wakubo wangaphambili. Ngokuzayo sizobonisa indlela la ukwesaba okufanele.
Ukuze siqonde okushiwo yowesifazane iphupho kungaba lula uma ekhumbula imizwelo sabhekana nalo kulezi ke. Uma isimo akathathi hlangothi noma okuhle, musa ukusheshe ukumemezela la amaphupho angokwesiprofetho. Kungenzeka ukuthi iphupho ibonisa imizwa engaphakathi kuphela elele. Kubandakanya labo abangenathuba maqondana obeshade ngesiwombe sesibili. Sekuyisikhathi abuqede amacala okulindile, uziphe ukujabulela impilo elokuthula.
Kuthiwani uma ngesikhathi ebuka amaphupho senkosikazi yakhe akakaze akhathazeke, besaba ukuthi lokhu kungase kusho ukuthini? Kulokhu, ekuphileni kwangempela Owesifazane angaba uhlangabezana nezinkinga emkhayeni. Isibhakabhaka endlini isikhashana liwohloka, amalungu emindeni shi ezingxabanweni. Kungcono ukuzama ukuvimbela lokhu, kungenjalo ubudlelwano phakathi nendlu eside sours. Ngokuthakazelisayo, nowayengunkosikazi unkosikazi ngiphuphe umyeni wakhe asikwazi ukuba lezi zinkinga asihlobene ngokuphelele.
Chaza ukuthi yini lokho! Knife amaphupho - kusho ukuthini?
Kubonakala njengenhlangano izindiza ilimele (sonnik) incazelo nencazelo
Kungakhathaliseki iphupho kuyagcwaliseka ngoLwesine?
Inhlonhlo Gydansky: imali, isimo sezulu, ababizwa nangokuthi uhulumeni. Reserve enhlonhlweni Gydan
Indlela thunga lolwandle ingubo ngezandla zakho?
I-Venturi busiza: isimiso sokusebenza, incazelo, isicelo
Izinkinga of ujove esicutshini. Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa ukubulawa lesifanele
Ekukhuluma emmangweni - Amathiphu
Izihlahlana Cinquefoil: ukunakekelwa kanye kulinywe. amathiphu balimi